'Umyeni wami ungincisha ucansi' | News24
'Umyeni wami ungincisha ucansi'
Bulawayo - Umshadikazi oneminyaka engu-32 ubudala waseChitungwiza uyele umyeni wakhe enkantolo ngoba emncisha inkonzo yasekamelweni.
U-Alice Machingauta uthi akakhumbuli nokuthi walugcina nini ucansi.
Lolu daba luvele ngesikhathi efuna imali yesondlo sengane yakhe eneminyaka emithathu ubudala enkantolo, elinganiselwe ku-R3 643.69 kumyeni wakhe uTafadzwa Winya.
"Akafuni ukungithinta, sisahlala emzini owodwa kodwa angisakhumbuli nokuthi sagcina nini ukuzibandakanya ocansini," kusho uMachongauta etshela inkantolo.
OLUNYE UDABA: Owesilisa uxhoshe izingane zakhe ngoba ethi zine-HIV
"Akangitshengisi ne-pay slip yakhe kodwa ngiyazi engakwazi ukunginika imali elinganiselwe ku-R3 643.69 njengoba enebhizinisi lakhe eceleni."
UTafadzwe uthe uhola imali elinganiselwe ku-R1 821.85 njalo ngenyanga wathi futhi uthenga ukudla kwemali elinganiselwe ku-R1 457.48 njalo ngenyanga, kubika iBulawayo24.